ပန်ဒိုရာ: တဖက်လူရဲ့ အနေအထား
Posted by pandora at 11:30 PM
Professional Pan :)
ဘယ်နဲ့ ညာ လောက်ပဲ မှားမယ် ဆိုရင်
အမှန်တိုင်း မြင်ရအောင် နောက်မှန် တချပ် ထပ်ခံ ကြည့်ယူပါ့မယ်။
အရင်မှန်မှာ ပုံ ပီပီ သသ မြင်ရဖို့ ပြဒါး ပါပါစေ။
ရေးလည်းရေးနိုင်ပါပေ၊ ဆက်လည်းရေးနိုင်ပါစေ ပန်ဒိုရာရေ
မမရေ ... ၂၀၁၂ မှာ ဒီကမ္ဘာတောင် ဆုံးလို့ နောက်ထပ်ကမ္ဘာ အသစ်ပေါ်လာတော့မယ် ထင်တယ်နော်။ အခုထိ အမှန်ကို မမြင်ရသေးဘူး။ ကဗျာလေးက အရမ်းကောင်းတယ် မမရေ။
ရေရဲ့အရွေ့ ငါးရဲ့အလျား ..
နည်းနည်းပါးပါးတော့ လွဲလွဲမှားမှားရှိမတဲ့ ..
အဲဒီအလွဲလွဲအမှားမှား အနည်းနည်း အပါးပါးထဲမှာ..
A ma mlay....ma nor hr ri ....
တစ်ဖက်လူရဲ့ အနေအထားကို သေချာအောင် ပြောင်းပေးနိုင်မယ့် အစွမ်းတွေ ကိုယ့်မှာ လိုနေတာပေါ့နော..
ကဗျာလေး ဖတ်ရှုခံစားသွားတယ် အစ်မရေ..
ဟန်ကြီးပန်ကြီးနဲ့မှန်ရှေ့ မှာ လျှောက်လို့ သာ
ကဗျာလေးကို လာဖတ်သွားပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ် ပြည့်စုံတဲ့ ကဗျာလေးပါပဲ။
Hi, i think that i saw you visited my internet web page therefore i came to ??return the favor??.I'm attempting to come across things to increase my website!I suppose its ok to make use ofafew of your suggestions!!